चीन र नेपालसहित चार मुलुकको छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ साउन १३ गते १४:३०
Foreign Minister Hon. Mr. Pradeep Kumar Gyawali at the Video Conference of Foreign Ministers of Afghanistan, China, Nepal and Pakistan on COVID-19. @PradeepgyawaliK@bairagi_shanker @PaudyalBR pic.twitter.com/Ct6Pk20pGv
— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) July 27, 2020
र यी चार मुलुकसँग विश्वको करिब ५० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या हुनेछ। चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अथतन्त्र भएको मुलुक हो भने राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य पनि। र सामरिक दृष्टिकोण पनि चीन विश्वकै तेस्रो शक्तिशाली मुलुक हो। त्यसैले पनि चीनको अगुवाईमा क्षेत्रीय संगठन बने त्यसले दक्षिण एशियालाई नयाँ उचाईँमा पुर्याउने देखिन्छ।